Thwebula PowerArchiver 19.00.59 Standard... – Vessoft
Isigaba: Ukucindezelwa kwamafayela
Ikhasi elisemthethweni: PowerArchiver
Lolu hlelo ivumela ukusebenza ezinqolobaneni masinya. Base edidiyele isekela takhiwo ifayela ethandwa kakhulu kuhlanganise ZIP, CAB, 7-Zip, LHA (LZH), RAR, ARJ, BH (BlackHole), ARC, ZOO, Gzip, itiyela (+ TAR.GZ) kanye ACE. Kukhona kungenzeka zihlukanise amafayela ezinkulu zibe izingxenyana nobukhulu echaziwe. Le nguqulo entsha ifakwe isikhombikubona nice evumela ukuthi wena ukulawula okuqukethwe kalula. Kwengeta imisebenzi ejwayelekile kungaba futhi ishintshe amagama ifayela ezisesandleni ezinqolobaneni, ufake izinhlelo ngqo ezinqolobaneni ubhekisise kubo ukuba amagciwane. Ngaphezu kwalokho, ungase ukuguqula amafayela komunye format kwesinye futhi abavikele nge password, sibuyisele enqolobaneni uma umonakalo, njll
Ukwesekwa disk image izakhiwo bin, IMG, ISO and Nrg
Ukwesekwa Okugcwele for midlalo (Base 64)
Ngokudalwa CAB, ZIP ne lwangaphandle pae ngosizo wizadi ekhethekile self-ukukhipha Ingobo
Ukusekela unlimited Usayizi ZIP-Ingobo
Manager Iphasiwedi ukugcina le zinhlanganisela ezisetshenziswa kakhulu kunazo
Ukuguqula emkhatsini archives
Umsebenzi search on the ezinqolobaneni
Amazwana ku PowerArchiver
PowerArchiver software ehlobene
IZArc – isoftware yokucindezela nokunciphisa izinqolobane zezinhlobo ezahlukahlukene. Isoftware isekela ukuguqulwa phakathi kwamafomethi wokufaka kungobo yomlando futhi inika amandla ukubuyisa okugciniwe okulinyaziwe.
Ithuluzi obusebenzayo yakhelwe ukusebenza nge ezinqolobaneni. Isofthiwe isekela takhiwo popular futhi ikuvumela ukuba ukwengeza watermark ukuvikeleka kwe-copyright.
Le software iklanyelwe ukukhulula isikhala sediski ngokususa amafayili wesifaki esiphelelwe yisikhathi (.msi) kanye namafayela we-patch (.msp) kusuka ohlelweni.
I-Auslogics Disk Defrag – ithuluzi elilula lokwenza ngcono nokwenza ngcono ukuqina kohlelo. Isoftware ivumela ukweqa ama-hard disk bese uhlela amafayela.
I-Dr.Fone toolkit ye-Android – isofthiwe yakhelwe ukwenza isipele, ukubuyisa imininingwane, ukuthola amalungelo ezimpande, ukususa yonke imininingwane bese kudedelwa nokukhiya isikrini kwamadivayisi we-Android.
I-IntelliJ IDEA – indawo ehlakaniphile yokuthuthukiswa kwesoftware igxile ekusebenzeni nasekugxileni konjiniyela emisebenzini ebaluleke kakhulu.
I-Balabolka – ithuluzi lokufunda noma yimiphi imibhalo noma amafayela wombhalo ngokuzwakalayo. Isoftware iqinisekisa ukwenziwa kwekhwalithi kombhalo ngamaphimbo ahlukene nangejubane elihlukahlukene.